မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးက ဘယ်သူနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံးလဲ..?
July 22, 2019 Htin Kyaw Lwin News, Premier League 0
နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်း ပေါ်လစီပိုင်းအရရော၊ နည်းစနစ်ပိုင်းအရပါ အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်နေပြီး ဆိုးလ်ရှားရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာနဲ့ ဖန်တီးပုံဖော်နေတဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ ပုံစံသစ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာထွက်ခွာသွားတဲ့ မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးကို ဘယ်သူက ဆက်ခံခွင့်ရမလဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အသင်းမှာဆက်နေအောင်စည်းရုံးရမယ့်သူလား၊ တကယ်ပဲ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးရှိတဲ့သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့သူကို ဦးဆောင်သူအဖြစ် ဆိုးလ်ရှားကရွေးချယ်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာလည်းရှိနေတာပါ။ ရာသီသစ် မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးကို အနီးစပ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ5ဦးကို ခန့်မှန်းကြည့်ကြရအောင်…။
2010 ကတည်းက မန်ယူမှာရောက်နေတဲ့ 29 နှစ်အရွယ် စမောလင်းဟာ လက်ရှိကစားသမားတွေထဲမှာတော့ ကာလရှည်ကြာနေသူတစ်ဦးပါ။ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဖြစ်နေတာကလည်း သူ့ရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။ ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာလည်း သူဟာ မကြာခဏ အသင်းကိုဦးဆောင်ခွင့်ရခဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ ခြေစွမ်းကပုံမှန်မရှိသလို မကြာခဏလည်း အမှားလုပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ ပရိသတ်အများစုကတော့ စမောလင်းကိုခန့်အပ်ဖို့ ထောက်ခံကြမယ်မထင်ပါဘူး။
ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်က မန်ယူရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဟာ အက်ရ်ှလေယန်းလို့ပြောထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ လောလောဆယ် သူပါဝင်တဲ့ပွဲတွေမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘစ်ဆာကာနဲ့ လုခ်ရှောတို့ရှိနေတဲ့ ဘယ်ညာခံစစ်နှစ်ဖက်မှာ အက်ရ်ှလေယန်းပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကတော့ သိပ်မသေချာပါဘူး။ အသက် 34 နှစ်အရွယ် အက်ရ်ှလေယန်းဟာ မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုနဲ့တောင်ရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်လို့ ဆိုးလ်ရှားကသာ သူ့ကိုခန့်အပ်မယ်ဆိုရင် ကန့်ကွက်မှုတွေ တော်တော်များနိုင်ပါတယ်။
မန်ယူအကယ်ဒမီထွက်ဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်းကလည်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်လို့ ပေါ့ဂ်ဘာကို အသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးပေးမယ်ဆိုရင် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်နေတာက သူ့ရဲ့ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင် နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်ပါ။ အခုအသင်းပြောင်းမယ်ပြောလိုက်၊ စိတ်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်၊ ကောင်းချင်ရင်လည်း ထကောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ဦးကို ကစားသမားအားလုံးက ဘယ်လိုယုံကြည်ပြီး အားကိုးရမလဲဆိုတာကလည်း ပြသနာတစ်ခုပါပဲ။
မန်ယူနဲ့ စံချိန်တင်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဖို့ရှိနေပြီး အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်း မကြာခဏတာဝန်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အသင်းမှာရှိနေတာ 8 ရာသီရှိပြီဖြစ်သလို ကလပ်ရဲ့တစ်ရာသီအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်း စံချိန်တင်ရထားတဲ့သူပါ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူးကို လိုချင်တယ်ဆိုပြီး မကြာသေခင်းကမှ ဖွင့်ဟထားပါတယ်။ ဂိုးသမားတစ်ဦးက အသင်းကိုဦးဆောင်တာမျိုးဟာ အမြဲတမ်းတော့ မကောင်းပေမယ့် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်တဲ့တစ်ချက်ကလွဲရင် ဒီဂီယာဟာ ဒီရာထူးအတွက် ထောက်ခံမှုတော်တော်များများရနိုင်တဲ့သူမျိုးပါပဲ။
အသက် 21 နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သူတစ်ဦးဟာ မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက်ပါ့မလား။ မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမန်ယူအသင်းတစ်သင်းလုံးမှာ ဆိုးလ်ရှားအကြိုက်ဆုံးသူက ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရှိနေတဲ့အတွက် လူကာကူကိုရောင်းချဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးပမ်းနေပြီး နောက်ထပ်ခေါ်ယူဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း အထောင်တိုက်စစ်မှူးက လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ မန်ယူအကယ်ဒမီထွက်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်နေတာဟာ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်အတွက်တော့ အဓိကအားသာချက်တွေလို့ဆိုရမှာပါ။
မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးက ဘယျသူနဲ့ အထိုကျတနျဆုံးလဲ..?
နှရောသီစြေးကှကျအတှငျး ပျေါလစီပိုငျးအရရော၊ နညျးစနဈပိုငျးအရပါ အပွောငျးအလဲတှပွေုလုပျနပွေီး ဆိုးလျရှားရဲ့ကိုယျပိုငျစတိုငျ၊ ကိုယျပိုငျအိုငျဒီယာနဲ့ ဖနျတီးပုံဖျောနတေဲ့ မနျယူအသငျးရဲ့ ပုံစံသဈတဈခုကိုမွငျတှနေ့ရေပါပွီ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ အနျတိုနီယိုဗလနျစီယာထှကျခှာသှားတဲ့ မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးကို ဘယျသူက ဆကျခံခှငျ့ရမလဲဆိုတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာမေးခှနျးတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ အသငျးမှာဆကျနအေောငျစညျးရုံးရမယျ့သူလား၊ တကယျပဲ ခေါငျးဆောငျမှုအရညျအသှေးရှိတဲ့သူလား၊ ဒါမှမဟုတျ ခွစှေမျးကောငျးတဲ့သူကို ဦးဆောငျသူအဖွဈ ဆိုးလျရှားကရှေးခယျြမလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာလညျးရှိနတောပါ။ ရာသီသဈ မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးကို အနီးစပျဆုံးပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိသူ5ဦးကို ခနျ့မှနျးကွညျ့ကွရအောငျ…။
2010 ကတညျးက မနျယူမှာရောကျနတေဲ့ 29 နှဈအရှယျ စမောလငျးဟာ လကျရှိကစားသမားတှထေဲမှာတော့ ကာလရှညျကွာနသေူတဈဦးပါ။ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျဖွဈနတောကလညျး သူ့ရဲ့အားသာခကျြပါပဲ။ ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာလညျး သူဟာ မကွာခဏ အသငျးကိုဦးဆောငျခှငျ့ရခဲ့သူပါ။ ဒါပမေဲ့ ခွစှေမျးကပုံမှနျမရှိသလို မကွာခဏလညျး အမှားလုပျတတျတဲ့သူဖွဈလို့ ပရိသတျအမြားစုကတော့ စမောလငျးကိုခနျ့အပျဖို့ ထောကျခံကွမယျမထငျပါဘူး။
ဆိုးလျရှားကိုယျတိုငျက မနျယူရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဟာ အကျရျှလယေနျးလို့ပွောထားခဲ့ဖူးပါတယျ။ လောလောဆယျ သူပါဝငျတဲ့ပှဲတှမှော အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈတာဝနျယူနတောပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘဈဆာကာနဲ့ လုချရှောတို့ရှိနတေဲ့ ဘယျညာခံစဈနှဈဖကျမှာ အကျရျှလယေနျးပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ကတော့ သိပျမသခြောပါဘူး။ အသကျ 34 နှဈအရှယျ အကျရျှလယေနျးဟာ မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုနဲ့တောငျရငျဆိုငျနရေသူဖွဈလို့ ဆိုးလျရှားကသာ သူ့ကိုခနျ့အပျမယျဆိုရငျ ကနျ့ကှကျမှုတှေ တျောတျောမြားနိုငျပါတယျ။
မနျယူအကယျဒမီထှကျဖွဈပွီး ခွစှေမျးကလညျးကောငျးတဲ့သူဖွဈလို့ ပေါ့ဂျဘာကို အသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးပေးမယျဆိုရငျ သငျ့တျောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခကျနတောက သူ့ရဲ့ကှငျးတှငျး၊ ကှငျးပွငျ နထေိုငျမှုပုံစံကွောငျ့ပါ။ အခုအသငျးပွောငျးမယျပွောလိုကျ၊ စိတျမပါတဲ့ပုံစံမြိုးလုပျလိုကျ၊ ကောငျးခငျြရငျလညျး ထကောငျးလိုကျဖွဈနတေဲ့သူတဈဦးကို ကစားသမားအားလုံးက ဘယျလိုယုံကွညျပွီး အားကိုးရမလဲဆိုတာကလညျး ပွသနာတဈခုပါပဲ။
မနျယူနဲ့ စံခြိနျတငျစာခြုပျသဈခြုပျဖို့ရှိနပွေီး အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈလညျး မကွာခဏတာဝနျယူခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အသငျးမှာရှိနတော 8 ရာသီရှိပွီဖွဈသလို ကလပျရဲ့တဈရာသီအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကိုလညျး စံခြိနျတငျရထားတဲ့သူပါ။ သူကိုယျတိုငျကလညျး မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျရာထူးကို လိုခငျြတယျဆိုပွီး မကွာသခေငျးကမှ ဖှငျ့ဟထားပါတယျ။ ဂိုးသမားတဈဦးက အသငျးကိုဦးဆောငျတာမြိုးဟာ အမွဲတမျးတော့ မကောငျးပမေယျ့ အင်ျဂလိပျမဟုတျတဲ့တဈခကျြကလှဲရငျ ဒီဂီယာဟာ ဒီရာထူးအတှကျ ထောကျခံမှုတျောတျောမြားမြားရနိုငျတဲ့သူမြိုးပါပဲ။
အသကျ 21 နှဈပဲရှိသေးတဲ့သူတဈဦးဟာ မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈထိုကျပါ့မလား။ မေးခှနျးထုတျစရာကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျရှိမနျယူအသငျးတဈသငျးလုံးမှာ ဆိုးလျရှားအကွိုကျဆုံးသူက ရကျရျှဖို့ဒျပဲဖွဈမယျထငျတယျ။ ရကျရျှဖို့ဒျရှိနတေဲ့အတှကျ လူကာကူကိုရောငျးခဖြို့ အသညျးအသနျကွိုးပမျးနပွေီး နောကျထပျချေါယူဖို့ရပေနျးစားနတေဲ့သူတှထေဲမှာလညျး အထောငျတိုကျစဈမှူးက လုံးဝမပါဝငျပါဘူး။ မနျယူအကယျဒမီထှကျစဈစဈဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျတဈဦးလညျးဖွဈနတောဟာ ရကျရျှဖို့ဒျအတှကျတော့ အဓိကအားသာခကျြတှလေို့ဆိုရမှာပါ။